Dr. တင့်ဆွေ Foods for Heart « kyunhla Township
Home » ကျန်းမာရေး » Dr. တင့်ဆွေ Foods for Heart
Dr. တင့်ဆွေ Foods for Heart
Friday, March 23, 2012 Foods for Heart နှလုံးအတွက် အာဟာရ
ဆေးပညာစာတွေကို အနောက်နိုင်ငံတွေကနေ ရေးကြတာများလို့ သူတို့စားတာတွေ။ သူတို့သိတာတွေသာ ပါတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအစားအစာ ၂ ဒါဇင်ကသာ ကောင်းတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ ဒီလို ကောင်းတာတွေရော ဒိထက် ကောင်းတာတွေပါ ကိုယ့်ဆီမှာလဲ ရှိနေ စားနေကြတယ်လို့ ယူဆစေချင်ပါတယ်။ ဆိုပါစို့ ကျွန်တော်တို့ စားသုံးနေကြတဲ့ နာမည် အမျိုးမျိုးနဲ့ ပဲတွေလဲ သူတို့ပြောတဲ့ ပဲနက်လိုကောင်းပါမယ်။ သူတို့ဆီမှာ ဝိုင်အနီကို မသောက်သူမရှိတဲ့ပြင် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း များစွာတန်တဲ့ စီးပွါးရေးလဲဖြစ်လို့ ကောင်းတာကို လိုက်ရှာရေးနေကြတယ်။ ဝိုင်ကို မြင်တောင် မမြင်ဘူးသူတွေက ဝိုင်သောက်နေသူတွေထက် နှလုံးကျန်းမာရေး ကောင်းနေတာတွေ ရှိပါတယ်။
1. Fresh Herbs ဆေးဘက်ဝင် အရွက်များ
ဆား၊ အဆီ နဲ့ (ကိုလက်စထော) တွေကို ကျစေတာမှန်သမျှ နှလုံး-ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်။ အစေ့အဆံတွေ၊ အမွှေးနံ့သာအတွက် သုံးတာတွေ၊ ဘယ်ရီသီးတွေနဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်အထိ ကောင်းတာတွေလို့ အကြမ်းပြောရင် ရတယ်။ Heart disease နှလုံးရောဂါ၊ Stroke နှလုံးနံ့ဆက်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်-သွေးကြောရောဂါ၊ Blood pressure သွေးတိုးရောဂါ နှလုံးကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ (ကိုလက်စထော) များတာနဲ့ ဆီးချိုရောဂါအတွက်ပါ ကောင်းမှာဖြစ်တယ်။ Rosemary ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင်တမျိုး၊ Sage သာဂူရွက်၊ Oregano တောရုံးပင် နဲ့ Thyme စမုန်ဖြူတွေထဲမှာ Antioxidants (အင်တီ-အောက်စီဒင့်) တွေပါနေတယ်။ သပ်သပ်ရေးထားပါသေးတယ်။
Black Beans ပဲနက်2. Black Beans ပဲနက်
Folate (ဖေါလိတ်) နဲ့ Antioxidants (အင်တီ-အောက်စီဒင့်) ဓါတ်တွေပါတယ်။ Magnesium (မက်ဂနီဆီယမ်) ဓါတ်က သွေးတိုးကျစေတယ်။ Fiber (ဖိုက်ဘာ) လဲပါတယ်။ ဒီဓါတ်က (ကိုလက်စထော) နဲ့ သကြားဓါတ်တွေကို ကျစေမယ်၊
Red Wine ဝိုင်နီ3. Red Wine ဝိုင်နီ
များရင်တော့ မကောင်းပါ။ Resveratrol နဲ့ Catechins ခေါ်တဲ့ Antioxidants (အင်တီ-အောက်စီဒင့်) တွေပါနေတယ်။ Alcohol အရက်ရဲ့သဘောက HDL ခေါ်တဲ့ ကောင်းတဲ့ (ကိုလက်စထော) ကို အားပေးတယ်။ သောက်ဘို့ အားမပေးပါ။
Salmon (ဆယ်လ်မွန်) ငါး4. Salmon (ဆယ်လ်မွန်) ငါး
နာမည်ကြီး (အိုမီဂါ-သရီး) တွေ ပါနေတယ်။ Omega-3s EPA နဲ့ DHA ကနေ Rhythm disorders နှလုံးခုန်မမှန်တာကို သက်သာစေတယ်။ Triglycerides (ထရွိုင်ဂလစ်စထရွိုက်) တွေကိုလဲ နည်းစေလို့ ရောင်တာကိုပါ သက်သာစေတယ်။
Tuna (ကျူနာ) ငါး5. Tuna (ကျူနာ) ငါး
ဒီငါးထဲမှာလဲ (အိုမီဂါ-သရီး) တွေပါတာဘဲ။ ဈေးလဲချိုတယ်။ Albacore အဖြူမျိုးမှာ ပိုပါတယ်။ Mackerel (မက်ကရယ်လ်) ငါး၊ Herring (ဟာရင်) ငါးသလောက်တမျိုး၊ Lake trout (ထရောက်) ရေချိုငါးတမျိုး၊ Sardines (ဆာဒင်း) ငါးသေတ္တာငါး၊ Anchovies ငါးပါးနီတွေကလဲ အဲလိုဘဲ ကောင်းတယ်။
Virgin Olive Oil (အောလစ်ဖ်) ဆီ6. Virgin Olive Oil (အောလစ်ဖ်) ဆီ
သံလွင်ဆီမှာ Polyphenols (ပေါ်လီဖီနောလ်) ခေါ်တဲ့ Antioxidants (အင်တီအောက်စီဒင့်) တွေ ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အတွက်ကောင်းတဲ့ Monounsaturated fats အဆီအမျိုးအစားလဲ ပါတယ်။
Walnuts သစ်ကြားသီး7. Walnuts သစ်ကြားသီး
တနေ့မှာ လက်တကုပ်စာ တအောင်စခွဲလောက် စားပေးပါ။ (ကယ်လိုရီ) ၃ဝဝ ရမယ်။ Cholesterol (ကိုလက်စထော) ကျစေမယ်၊ နှလုံးက သွေးကြောလေးတွေ ရောင်နေတာလဲ သက်သာစေမယ်။ သစ်ကြားသီးမှာ Omega-3s, Monounsaturated fats နဲ့ Fiber တွေပါတယ်။
Almonds ဗာဒံစေ့8. Almonds ဗာဒံစေ့
Vitamin E ဗီတာမင်-အီး၊ Plant sterols (စတာရောလ်)၊ Fiber ဖိုက်ဘာ နဲ့ Fats နှလုံးအတွက် ကောင်းတဲ့ အဆီတွေ ပါတယ်။ LDL cholesterol မကောင်းတဲ့ (ကိုလက်စထော) ကျစေမယ်။ ဆီးချိုကို ကာကွယ်မယ်။
Edamame ပဲပုပ်9. Edamame ပဲပုပ်
Cholesterol (ကိုလက်စထော) ကျစေတဲ့ Fiber ဖိုင်ဘာပါတယ်။ သွေးဆုံးချိန်အတွက်ကောင်းတာကို ရေးထားပါတယ်။
Tofu တို့ဖူး10. Tofu တို့ဖူး
အသားမစားသူ၊ မသင့်သူတွေ တို့ဖူးစားရင် (ပရိုတင်း) ရစေမယ်။ ဓါတ်တားတွေ၊ Fiber ဖိုက်ဘာ နဲ့ Polyunsaturated fats ကောင်းတဲ့အဆီလဲရမယ်။
Sweet Potatoes ကန်စွန်းဥ11. Sweet Potatoes ကန်စွန်းဥ
ဆီးချိုရှိသူ အားလူးအစား ကန်စွန်းဥစားနိုင်တယ်။ Fiber ဖိုက်ဘာ၊ Vitamin A ဗီတာမင်-အေ၊ Lycopene (လိုင်ကိုပိန်း) ဓါတ်တွေက ကောင်းတယ်။ (ဆရာဝန်တိုင်းကတော့ သဘောမတူပါ။)
Oranges လိမ်မော်သီး12. Oranges လိမ်မော်သီး
(ကိုလက်စထော) ကိုနိုင်တဲ့ Fiber pectin (ပက်ပ်တင်-ဖိုက်ဘာ) ပါတယ်။ Potassium (ပိုတက်ဆီယမ်) ပါလို့ သွေးတိုးနဲ့ တည့်တယ်။
Swiss Chard (ဆွစ်-ချတ်) အရွက်13. Swiss Chard (ဆွစ်-ချတ်) အရွက်
အစိမ်းရင့်ရောင် အရွက်ဖါးဖါး အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ Potassium (ပိုတက်စီယမ်) နဲ့ Magnesium (မက်ဂနီစီယမ်) တွေပါတယ်။ သွေးတိုးအတွက် ကောင်းတယ်။ Fiber (ဖိုင်ဘာ)၊ Vitamin A (ဗီတာမင်-အေ)၊ နောက်ပြီး Lutein (လူတိန်း) နဲ့ Zeaxanthin (ဇိယာဇန်သင်) ခေါ်တဲ့ (အင်တီအောက်စီဒင့်) တွေ ပါသေးတယ်။
Carrots မုံလာဥနီ14. Carrots မုံလာဥနီ
သကြားဓါတ်ကို ထိန်းနိုင်မယ်လို့ ယူဆတယ်။ (ကိုလက်စထော) ကိုလဲကျစေတယ်။
. Barley (ဘာလီ)15. Barley (ဘာလီ)
ဖြူနေအောင် ချွတ်မထားတဲ့ အစေ့အဆံက ပိုကောင်းတယ်။ (ကိုလက်စထော) ကိုကျစေတယ်။ သကြားဓါတ် နည်းစေတယ်။
Oatmeal အုတ်စပါး16. Oatmeal အုတ်စပါး
LDL (ကိုလက်စထော) ကို ကျစေမယ်။ ဆီးချိုသမား စားသင့်တယ်။
Flaxseed နှမ်း17. Flaxseed နှမ်း
နှမ်းကြပ်လဲခေါ်တယ်။ အမှန်က အပင်တွေကရတဲ့ အဆီတွေက အသားကနေရတာထက် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်။ Fiber (ဖိုက်ဘာ)၊ Lignans (လစ်ဂနင်) ခေါ်တဲ့ Phytochemicals ဓါတ်ပါတယ်။ ALA ခေါ်တဲ့ (အိုမီဂါ-သရီး) ပါတယ်။
Yogurt18. Low-Fat Yogurt အဆီနည်း (ရောဂတ်)
အရိုးအတွက် ကောင်းတယ်။ သွေးတိုးလဲ ကောင်းတယ်။ Calcium (ကယ်လ်စီယမ်) နဲ့ Potassium (ပိုတက်စီယမ်) တွေ ပါတယ်။
Margarine19. Foods Fortified With Sterols (စတာရောလ်) ပါအစာ
Margarine (မာဂရင်း) Soy milk ပဲနို့ နဲ့ Orange juice လိမ်မော်ရည်တွေ ကောင်းတယ်။ (ကိုလက်စထော) ကို ချပေးမဲ့ (စတာနောလ်) ဆိုတာ ပါလို့ ဖြစ်တယ်။
ဆီးချို နဲ့ သွေးတိုးရှိနေပြီးသူတွေတော့ Caffeine (ကေဖင်း) က မသင့်ပါ။20. Coffee and tea ကော်ဖီ နဲ့ လက်ဖက်ရည်
ဆီးချိုကာကွယ်ဘို့ သကြားမပါဘဲ သောက်ပါ။ ဆီးချို နဲ့ သွေးတိုးရှိနေပြီးသူတွေတော့ Caffeine (ကေဖင်း) က မသင့်ပါ။
အရောင်တင်မှုံ့ အစစ် (အင်စူလင်) ဟော်မုန်းတိုးစေလို့ ဆီးချိုအတွက်ကောင်းတယ်21. Cayenne Chili Pepper အရောင်တင်မှုံ့ အစစ်
(အင်စူလင်) ဟော်မုန်းတိုးစေလို့ ဆီးချိုအတွက်ကောင်းတယ်။ အဝလွန်သူတွေလဲ သုံးသင့်တယ်။
သွေးတိုးနေသူတွေ ငန်တာ မစားရပါ။22. Kosher Salt (ကိုရှာ) ဆား
သွေးတိုးနေသူတွေ ငန်တာ မစားရပါ။ ငန်တာနဲ့တူတဲ့ (ကိုရှာ) ဆားသုံးနိုင်ပါတယ်။ (ဆိုဒီယမ်) နည်းနည်းသာပါတယ်။ ငန်မယ်။ လူတယောက်မှာ (ဆိုဒီယမ်) 1,500 mg ထက်မများသင့်ဘူး။ Kosher salt ဇွန်းလေးတဇွန်းထဲမှာ (ဆိုဒီယမ်) 1,120-2,000 mg ပါတာ သတိထားပါ။
Cherries ချယ်ရီသီး23. Cherries ချယ်ရီသီး
Anthocyanins (အင်သိုစိုင်ယာနင်) ခေါ်တဲ့ (အင်တီ-အောက်စီဒင့်) ပါတယ်။
Blueberries (ဘယ်ရီ) သီး
Facebook မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။ မူရင်းပို့စ် အား ဒီနေရာ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
By shwekyunhla in ကျန်းမာရေး on May 11, 2012 .
← FEC ဓမ္မပါလ ကျောင်း	ရှေးရှေးတုန်းက မြန်မာများ →